गर्भवती महिलाले कसरी सुरक्षित हुने?... :: डा. रीता मरहट्टा खनाल :: Setopati
डा. रीता मरहट्टा खनाल काठमाडौं, चैत १६
कोरोना भाइरस महामारी र 'लक-डाउन' को समय परिवार वा नातेदारमा कोही गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईंहरूको चिन्ता दोब्बर हुनु स्वाभाविक हो। अझ बच्चा जन्मिने दिन नजिकिएको घडीमा कोरोना संक्रमणले केही बिगार गर्छ कि भन्ने त्रास हुने नै भयो।
गर्भवती महिलालाई कोरोना संक्रमण देखिए हुर्किंदै गरेको बच्चालाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। गर्भवती भएको बेला महिलाको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुन्छ। यस्तो बेला महामारीबाट जोगिन उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बढी नै ख्याल राख्नुपर्छ।
गर्भवती महिला र उनको परिवार भिडभाडमा नजाने र घरमा सबैले नियमित साबुनपानीले हात धुने गर्नुपर्छ। घरभित्र बसेर नियमित व्यायाम, योग र प्रशस्त झोलपदार्थ सेवनले प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत पुग्छ। यसै सन्दर्भमा एक प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञका नाताले गर्भवती महिलाहरूले यो समय के गर्नुपर्छ भन्ने केही सुझाव राख्न चाहन्छु।
पहिलो तीन महिना वा १३-१४ साताको गर्भवती
तपाईं पहिलो तीन महिना वा १३-१४ साताको गर्भवती हुनुहुन्छ र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भने फोलिक एसिड चक्की प्रयोग गरिराख्नुस्। घरमा आराम गरेर बस्नुस् र प्रशस्त पोसिलो आहार तथा तरल पदार्थ पिउनुस्।
धेरै बान्ता आउने, रक्तस्राव हुने वा तल्लो पेट सहन नसक्ने गरी दुख्ने भए तुरून्त अस्पताल गएर सम्बन्धित चिकित्सकको राय लिनुपर्ने हुन्छ।
तीनदेखि सात महिना (१४-२८ साता) को गर्भवती
तीनदेखि सात महिनाको गर्भवती हुनुहुन्छ भने आइरन र क्याल्सियम चक्की नियमित खानुस्। घरमै बस्नुस, पोसिलो आहार खानुस् र सरसफाइमा ध्यान दिनुस्। बच्चा चल्न थालेको छ भने याद गर्नुस्। बच्चा चल्न थालेको अवस्थामा साधारणतया पाँच महिनामा ‘एनोम्याली स्क्यान’ (विशेष खालको भिडियो एक्सरे) गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो एक्सरे गरिसकेको छ भने चिन्ता लिनुपर्दैन। नगरेको भए २२-२३ सातासम्म गर्न मिल्छ। तपाईंलाई चार महिनाको टिटानस सुई लगाएको भए दोस्रो सुईका लागि केही साता कुर्न सक्नुहुन्छ। सुगर जाँच गर्न पनि केही साता कुर्न सक्नुहुन्छ।
आकस्मिक अवस्था- जस्तो रक्तचाप बढ्ने, गोडा धेरै सुन्निने, टाउको दुख्ने, बेहोस हुने, बच्चा कम चल्ने र रक्तस्राव हुने भएमा तुरून्त अस्पताल गएर सम्बन्धित चिकित्सकको राय लिनुपर्ने हुन्छ।
सातदेखि नौ महिना (२८-३७ साता) को गर्भवती
सातदेखि नौ महिनाको गर्भवती हुनुहुन्छ भने आइरन र क्याल्सियम नियमित प्रयोग गर्नुहोला। चिकित्सकले हरेक दुई सातामा बोलाएको भए पनि माथि उल्लिखित आकस्मिक अवस्थामा बाहेक घरमै आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
पछिल्लो एक महिनाभित्रको भिडियो एक्सरे छ भने ढुक्क रहनुस्। यो समय कहिलेकाहीँ पेट दुख्न सक्छ, बच्चा कम चल्न सक्छ, चनाखो रहनुहोला। रक्तचाप बढ्ने, गोडा धेरै सुन्निने, टाउको दुख्ने, बेहोस हुने र रक्तस्राव भए तुरून्त अस्पताल गएर सम्बन्धित चिकित्सकको राय लिनुपर्ने हुन्छ।
३७ सातामाथिको गर्भवती
नौ महिनाको गर्भवती हुनुहुन्छ भने चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हरेक साता बोलाएको हुनुपर्छ। यो अलि बढी सतर्क हुने बेला हो। तपाईंलाई सबै ठिक छ र नर्मल डेलिभरीको कोशिस गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूले खाइरहेको आइरन र क्याल्सियम खाँदै गर्नुहोला।
बच्चा चलेको विशेष ध्यान राख्नुहोला। बाह्र घन्टामा (बिहान ९ देखि बेलुकी ९ बजेसम्म) बच्चा दसचोटि चलेको छ र पछिल्लो दुई साताको भिडियो एक्सरे सामान्य छ भने चिन्ता लिनुपर्दैन। तारन्तार पेट दुख्न थाले, पानी बगे र अरू आकस्मिक समस्या आए तुरून्त अस्पताल जानुहोला।
बच्चा जन्मिने मिति यसै साताभित्र दिएको छ र अरू सबै कुरा ठिक छ, पेट दुखेको छैन, पछिल्लो दुई साताको भिडियो एक्सरेमा ठिकै भनिएको छ भने तोकिएको समयभन्दा एक साता कुर्न सक्नुहुन्छ। तोकिएको समयभन्दा एक साता नाघे अस्पताल जानु जरुरी हुन्छ।
यसबाहेक तपाईंको पहिलो बच्चा पाउन शल्यक्रिया गरेको थियो, बच्चा उल्टो वा छड्के छ, साल तल फर्किएको छ, रक्तचाप वा चिनीरोग छ, जुम्ल्याहा बच्चा छन् भने नियमित जाँच गराउने चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहनुहोला। चिकित्सकको रायअनुसार अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ।
शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर चिकित्सकले सल्लाह दिएको छ भने सामान्यतया बच्चा पाउन तोकिएको समयभन्दा लगभग दस दिनअघि नै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले समय मिलाएर अस्पताल जानुहोला।
माथि उल्लिखित अवस्थाबाहेक गर्भवती महिलामा कोरोना भाइरसको लक्षण देखापरे तुरून्त त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ।
(लेखक नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटीका प्राध्यापक हुन्।)
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत १६, २०७६, १६:००:००